Filtrer les éléments par date : mercredi, 18 mars 2020
mercredi, 18 mars 2020 19:09
Ambanja: Ranomboakazo efa lany daty miisa 36 fonosana tratra saika hamidy
Baoritra miisa 36 nahitana fonosana ranomboakazo « RITA » efa lany daty izay nokasaina nalefa tany Ambilobe no saron’ny mpitandro filaminana teto Ambanja. Tsy nisy taratasy fanomezan-dalana ho amin’ny famindrana ireo entana ireo ka nogiazana avy hatrany ireo baoritra ireo.
Niroso tamin’ny fandoroana ireo entana lany daty ireo ny teo anivon’ny Antenimieran’ny Indostria sy ny Varotra Ambanja ho fiarovana ny mpanjifa.
mercredi, 18 mars 2020 19:06
Tetezan’i Beketikety RN6: Hiverina ho azo hivezivezen'ny fiara indray manomboka ny alakamisy 19 martsa 2020.
Voapetraka ny tetezam-by (Pont Bailey) anoloana ilay tetezana nihotsaka ny marain'ny 14 marsa 2020 eo Beketikety, PK 496+900 amin'ny làlam-pirenena faha-6, ary hiverina ho azo hivezivezen'ny fiara indray ity tetezana ity manomboka ny alakamisy 19 martsa 2020.
Manainga ny mpampiasa làlana, indrindra ireo fiara vaventy, ny avy ao amin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy mba hanaja ny vesatra ambony indrindra afaka hifamezivezena eny amin'ny làlam-pirenena sy ny foto-drafitrasa rehetra miaraka amin'izy ireny.
mercredi, 18 mars 2020 12:54
Nosy-Be: Mitotongana ny vidin’ny felana Ylang Ylang
1 000 Ariary no ividianan’ny mpanangom-bokatra ny iray kilao amin’ny felana Ylang Ylang aty Nosy-Be amin’izao. 500 Ariary aza amin’ny toerana sasany, raha toa ka 6 000 Ariary izany teo aloha.
Betsaka ny tolotra noho ny tinady, ka izay no mampitotongana ny vidiny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fanazavana. Efa mifaninana amin’i Nosy Be ihany koa amin’izao ny vokatra avy atsy amin’ny nosy Mayotte ary Comores.
Ny Ylang Ylang moa dia ampiasaina indrindra amin'ny ranomanitra, na fanomezana fofona tsara ny savony, shampoing, na hanaovana huile essentielle. Raha any ivelany dia 45 euro na 190 000 ariary eo ny 100ml ny huile essentielle 100% pure.
mercredi, 18 mars 2020 12:32
Antsiranana: Misedra olana amin’ny famatsian-drano nanomboka ny alahady teo
Nisy fantsona lehibe roa lasan’ny rano ary nisy ihany koa ireo fantsona nilatsahan’ny vato ka mitaky fanamboarana, hoy ny avy eo anivon’ny Jirama. Ny ora-nikija no nitarika ny fahasimbana, ka izany no fototr’ity fikorontanan’ny famatsian-drano eto an-drenivohitry ny Faritra DIANA ity, hoy hatrany ny fanazavana.
Vahaolana vonjimaika ny fitaterana rano amin’ny "camions citerne", izay irahan’ny JIRAMA sy ny orinasa STAR miasa, hamatsiana ireo Fokontany samihafa. Ireo mponina akaikin’ny tobim-panadiovan-dranon’ny JIRAMA, PK7 kosa dia nomena alalana haka rano mivantana eo amin’io toby io.
Hisy « citerne » fanampiny avy any Antsohihy hanampiana ny famatsiana rano sy eo ampiandrasana ireo fitaovana fanampiny avy any Antananarivo, ilaina amin’ny fanamboarana ireo fantsona simba.
mercredi, 18 mars 2020 12:05
Manoloana ny fihanaky ny coronavirus: Hafatra avy amin’ny Biraon’ny Fivondronamben’ny Eveka
Antananarivo, faha 17 martsa 2020
Homba antsika mianakavy anie ny Fiadanan’ny Tompo
Efa manodidina an’i Madagasikara ny areti-mifindra Coronavirus (Covid 19) ankehitriny.
Miantso antsika rehetra hiombom-bavaka amin’ny Papa François ho an’ireo firenena tratran’izany. I Jesoa Kristy Tompo nibaby ny rofintsika rehetra ka nandresy ny ratsy tamin’izy nitsangan-ko velona, anie hanome hery ireo marary sy ireo mpitsabo, ary ny fianakaviany. Ary ankinintsika amin’ilay Ray be famindrampo ny fanahin’ireo havantsika namoy ny ainy.
Manasa antsika ho tony ary hanaraka ireo toromarika marina rehetra momba ny fihetsika, omen’ireo tompon’andraikitra sy manam-pahefana amin’ny alalan’ny haino aman-jery, eny fa na dia ny tsotra indrindra tokony harahina andavanandro aza hiarovana ny fihanak’ity aretina ity.
mercredi, 18 mars 2020 11:52
Naina Andriantsitohaina: « Nisy fahatarana ny SAMVA tamin’ny fandraofana fako noho ny olana samihafa »
Niaiky ny fiverenan’ny fako miangona eto an-drenivohitra ny Ben’ny tanàna, Naina Andriantsitohaina. Tranga izay nampitaraina ny mponina. Nahita maso mivantana ny zava-misy ny tenany rehefa nidina nijery tamin’ny toerana samihafa.
Raha ny fanazavany dia « nisy fahatarana kely ny SAMVA tamin’ny fandraofana fako noho ny olana ara-teknika samihafa ». « Noraisina ny fepetra », hoy i Naina Andriantsitohaina ary « efa manenjika ny fandraofana ny fako ny tompon’andraikitra ankehitriny ».
Nambaran’ny Ben’ny tanàna ihany koa fa haverina indray, afaka andro vitsivitsy, ny Asa tanamaro (HIMO) izay hanampy amin’ny fanadiovana ny tanàna sy hanome asa ny mponina.
mercredi, 18 mars 2020 11:05
Kitra – Fifanintsanana CAN 2021: Navotan’ny coronavirus ny « Stadium Mangarano » ?
Navotan’ny coronavirus sy ny fanapahan-kevitry Kaofederasiona afrikana ny baolina kitra na CAF ny hampihatona ireo lalao fifanintsanana ny CAN, noho ny fihanak’io valanaretina io aty Afrika, ny fitsarana ny fahafahan’ny « Stadium Mangarano » mandray lalao iraisam-pirenena, satria tsy tontosa ara-potoana ny fanarenana ireo lesoka sy fanarahana ny fepetra nomen'ny iraky ny CAF nitsirika ity foto-drafitrasa ity, afa-tsy ny fanesorana ireo mpivaro-kazo.
mercredi, 18 mars 2020 11:04
18 mars: Journée mondiale du recyclage
18 mars: Journée mondiale du recyclage.
mercredi, 18 mars 2020 10:23
Coronavirus: Aleo misoroka toy izay mitsabo
Marina fa tsy mbola misy marary na matin'ny coronavirus eto Madagasikara, ary hisaorana ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany amin'izany.
"Ramalina aza anefa nifehy hazo tokana", tsy aleo ve avy dia apetraka ny fitiliana na dia ny fitiliana hafanana ihany aza amin'ny lalam-pirenena sy ny seranam-piaramanidina anatiny, ny sambo mivezivezy ivelany sy anatiny.
Asiana check point ohatr'ireny ady amin'ny pesta ireny. Izay mpandeha taxi-brousse misy hafanana na ahiana dia efa atokana, ary araha-maso avy hatrany avokoa ireo mpandeha niara-dia taminy.
Eny amin'ny banky, sekoly, hopitaly, na toerana be olona, dia averina ny fitiliana hafanana, manadio tanana vao miditra ny birao, ny sekoly sy ny toeram-pivarotana lehibe samihafa.